Qaladaadka Ay Haweenku Sameeyaan Xiliga Lagu Jiro Kulanka Sariirta. - Hablaha Media Network
HMN:- Waxaa jira qaladaad dhanka sariirta oo haweenka ka dhaca , ogoow gabaryahay inta qaladaadkaan kaa dhacayaan raaxo macaan ma heleysid .
Haddii aad aamisan tahay in waxa dhan lagaa doonayo ay tahay in aad sariirta isku tuurto kana sugtid ninka baashaalka , ogoow ninka ma jecla jir aan naf laheyn waxaa muhiim ah in aad weydaarsato dareenka uu ku siinayo ee adna aad baashaaliso hadii sida alwaax iska taagnaatana waxa uu ka qaadayaa niyad jab.
Haweenka qaar ayaa aamisan in ay qalad tahay in haweeneyda bilaawdo ciyaarta sariirta tanina waa qalad weyn , ninka waxa uu jecel yahay in lamantiisa ahaato mid aad u soo jidata una muujisa rabitaankeeda ku aadan sameynta kulanka naxariista leh , si toosna ugu sheegto in ay sugi la dahay.
Hadii aad jeceshahay in ninkaada meel waliba oo jirkaada ah uu kaa dhunkado adna aad ka bakhiileysid hadaba waxaa tahay mid aan ninka wax ka aqoon , ninka waxa uu jecel yahay in lamaantiisa ay meel waliba ka dhunkato , ka baashaaliso ee isaga uun haka sugin wax waliba .
Gabaryaheey hadii ninka si degan ku baashaalin, kugu raaxeyn waxad daremeysaa xanaaq iyo cuqdad ee maxaa diidaya in si degan oo ad adeeg laheyn ugu raaxeeyso, ragga waa neceb yihiin haweeneyda sida ad adag ninka u kicisa oo taabashadeeda gacanta naxariis laga dareemeyn.
Ragga ma jecla haweeneyda kaliya daneysa in iyada ay hesho macaanka ooan dan ka laheyn ninka.
Sida haweeneyda u neceb tahay ninka aan habab cusub galmada u sameyneyn ayuu ninkana u neceb yahay haweeneyda aan soo hindiseyn habab macaan oo aan la hayen fikrad cusub.